समस्यालाइर् अवसरमा बदलौ – कृषक र प्रविधि
असार महिनामा धान रोपाईको बढी चर्चा हनुपर्नेमा गत महिना त्यसो नभई भारतबाट आउने तरकारीको विषादी ु परिक्षणको मद्दा निकै पेचिलो बन्यो । भारतबाट आयात ह ु ने तरकारीको परिक्षण पश्चात मात्र नेपाल भित्रिन दिने ु निर्णयको सारा देशवासीले स्वागत गरे । तर केही दिनमा नै उक्त निर्णय फित्र्ता गर्ने सरकारको कदमले सदन देखि सडकसम्म नै यो विषयले स्थान पायो । यो विषयले मिडिया र सामाजिक संजालमा यति धेरै स्थान पायो कि पधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु र सचिवहरु समेत स्पष्टिकरण दिन बाध्य भए । प ्र धानमन्त्री, मन्त्री, सचिव देखि साधारण ्र जनतासम्म सबैको चासो र टाउको दखाईको विषय नै बन्यो ।
ु विषादीको अवशेष भएको तरकारी र फलफूलको सेवनले मानव शरिरमा गम्भीर असर गर्छ । यसको सेवन गर्न हु न्न । ु यो करा आम उपभोक्ताले ब ु झेको छ नै भन्छन् तर फेरी किन तिनै उत्पादन खरिद गर्छन ? यो अर्को गम्भीर सवाल ु पनि छ । भारतबाट आएको तरकारीमा बिषादी भएको भन्ने करासँगै मेरो व्यक्तिगत ध्यान चाहि कति परिमाणमा ु तरकारी तथा फलफूल भित्रिदो रहेछ भन्नेमा गयो । भारतीय टिभि च्यानलहरुमा सिमा नाकामा रोकिएका तरकारी तथा फलफूल बोकेका भारतीय ट्रकहरुको लाईन देख्दा यती धेरै परिमाणमा भारतीय तरकारी नेपाल आउला र जस्तो लाग्यो । विषादीको चनौतीले त यही मनग्य तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने अवसर पनि त रहेछ भन्ने क ु रा छर्लंग बनाएको ु छ । यस्तो अवसरलाई संस्थागत गर्दै लैजाने पद्धतिको बिकास गर्न नसकेकोले हामो कृषि क्षेत्रमा समस्या ज्यूका ्र त्यू रहेको भन्न सकिन्छ । संस्थागत पद्धतिको अभावमा नै हामो धेरै स्थानीय उत्पादन उपभोक्ताको भान्छामा नप ्र गी ु कहिन्छन र भान्सामा भारतीय तथा तेश्रो म ु लकको उत्पादनले ठाँउ पाउँछ । हाम ु ो उत्पादन राम ्र ो भएन की सस्तो भएन ्र की, नियमित उत्पादन भएन वा अन्य केही भन्ने करामा बहस ह ु न्न् । कसरी स्थानीय उत्पादनले आयातित वस्त ु लाई ु पतिस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने क ्र रामा म ु ल्य श्रृंखलाका साझेदारहरुसँग छलफल गर्ने, योजना बनाउने , कार्यान्वयन ु गर्ने कराको बिकास नै भएन । अहिले विषादीको कारण भारतीय उत्पादन नआउला । उसले त्यो अवस्थामा स ु धार ु ल्याए पछि के बहानामा रोक्ने हो कसैले सोचेको छ ? हामी के गर्दा पतिष्पर्धी ह ्र न्छौ भन्ने क ु रामा बहस गरि आजको ु समस्यालाई अवसरमा बद्ल्ने सरुवात गर्न ु पर्दछ । स्थानीय निकायहरुको यसमा भ ु मिका महत्वपूर्ण छ । आगामी ु कार्यक्रमहरुलाई उत्पादनमखि संगसंगै संस्थागत तवरबाट अगाडी बढाउने र केबल किसानलाई मात्र होईन उत्पादन ु देखि बजारीकरण सम्मको लागि संस्थागत बिकासको लागि जोड दिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न पदर्छ ।
ु अर्को करा हामी सामाजिक संजालमा धेरै समस्याको क ु रा त राख्छौ तर समाधान कहिल्यै पनि राख्दैनौ । त्यसले ु समाज नै नकारात्मक हदैँ गईरहेको छ । सम्पूर्ण बिषय बिज्ञहरुलाई हाम ु ो अन ्र रोध के छ भने बिषादी रहित उत्पादन ु र उपभोगको वातावरण तयार पार्नका लागि गर्नपर्ने संस्थागत संरचनाको क ु राहरु पनि अगाडी ल्याउन ु प¥यो । केवल ु ल्याब नभएका करा होइन, भएका साधनस ु ोतहरुको कसरी उपभोग गर्ने भन्ने क ्र रा पनि ल्याउन ु प¥यो । उपभोक्ता र ु कृषक स्वयंको स्वस्थ्यमा पत्यक्ष असर प ्र ¥याउने विषादीको प ु योग न्यूनीकरण गर्दै लैजाने क ्र रामा संस्थागत बिकास ु गर्दै लैजानको क ु नै विकल्प छैन । यस तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । विषादी रहित उत्पादन र बिक्री वितरणमा ु व्यक्तिगत रुपमा भए गरेका पयासहरुलाई राज्यका निकायहरुले ग ्र हण गर्दै यसको विस्तारमा काम गर्न जरुरी छ । ्र नेपालमा पनि विषादी पयोग जथाभावी भइरहेको छ यसलाई पन सम्बोधन गन ्र्र पर्दछ । कर्मचारी नह ु नु, पु ाविधिक ्र नपग्नु, पु विधि नह ्र नु भन्दा अगाडी ईमान्दारीता र खबरदारिता छ की छैन सोच्न ु मु ख्य भएको छ । भोलि सबै पूर्वाधार ु होला तर कार्यानवयन गर्ने निकायमा ईमान्दारिता र जवाफदेहिता भएन भने के होला ? विषादी परिक्षणको विषयमा राज्यका निकायहरु बीच नै टकराव भएको करा स्वयं मन्त्री र सचिवको भनाईबाट पनि स्पष्ट भएको छ । क ु न मन्त्रालय ु , विभागको जिम्मेवारी के हो त्यसलाई स्पष्ट पार्दै अगाडी बढ्नको विकल्प छैन । यस्तो संवेदनशीला क ु रामा गैर ु जिम्मेवारी करा गरेर कसैले पनि उम्कन मिल्दैन ।
ु अन्त्यमा, असारको अन्तिम साता आएको पाकृतिक विपतले पनि हामीले सोच्न बाध्य त ्र ल्याएको छ । अत्याधिक ु वर्षका कारण आएको बाढी पहिरोमा परी कयौले ज्यान गमाएका छन भनै अरबौ मूल्यको क्षति भएको छ । यस्तो ु पाकृतिक विपतमा पनि सबैभन्दा बढी असर पर्ने कृषि क्षेत्रलाई नै हो तसर्थ राज्यका तिनै तहले विपतमा परेका ्र सबैलाई राज्य भएको अनभुति ह ु ने गरि काम गरोस भन्न चाहान्छ ु ।